Vernost (2019) | MM Movie Store
Fifthy Shades Triologyလို Eroticဆနျဆနျ ဒရာမာကားတှေ ဒီနှဈထဲ သိပျမထှကျပါဘူး။အခုထှကျတဲ့ကားကတော့ IMDd Rating 6/10ပါ။ Erotic လိုငျးအနနေဲ့တော့ မဆိုးဘူးပွောရပါမယျ။ မငျးသမီးလေးလညျး တျောတျောလှပါတယျ။ ဒီရုပျရှငျနဲ့ပဲ TIFF Award for Best Performance ဆုရသှားခဲ့တာပါ။
တဈနာရီဆိုတဲ့ ပွသခြိနျတိုတိုလေးနဲ့မလိုကျအောငျပါဖျောမနျ့ကောငျးတယျဆိုတဲ့ သဘောပါပဲ။ Eroticအသားပေး Drama filmဆိုတဲ့အတိုငျး လိငျမှုကိစ်စတော့အတျောပါပါတယျ။ ပါတယျဆိုပမေယျ့လို့Erotic Filmမို့ အရမျးကွီးတော့ မြှျောလငျ့တော့မထားကွပါနဲ့။ ဘာပွောပွောလေ ဒါမြိုးကားတှကေ မငျးသမီးလှရငျတောငျ တနျနပွေီမို့လား။
ဇာတျလမျးအကြဥ◌ျးလေးပွောပွရရငျ . လနျကာဟာ အသကျ ၃၀ မှာတငျ အောငျမွငျတဲ့ သားဖှားမီးယပျဆရာဝနျတဈယောကျဖွဈနပေါပွီ။ လူနာတှကေ သူနဲ့မှပွခငျြကွသလို လုပျဖျောကိုငျဘကျတှကေလညျးသူ့ကိုလေးစားကွပါတယျ။
ဒါပမေဲ့ တဖကျမှာလညျး သူ့ရဲ့အိမျထောငျရေးက အဆငျမပွပေါဘူး သူ့ခငျပှနျးဖွဈသူဆယျရို့ဂျြက လုပျဖျောကိုငျဘကျဖွဈသူ ခါဂြာနဲ့ ဖောကျပွနျနတေယျလို့ လနျကာက တထဈခယြုံကွညျနပေါတယျ။ဒီလိုနဲ့ ခငျပှနျးဖွဈသူကွောငျ့ စိတျထိခိုကျပွီး ထငျရာစိုငျးမိရာကနေ ဘာတှဆေကျဖွဈကုနျမလဲဆိုတာတော့ကိုယျတိုငျပဲကွညျ့ရှုခံစားလိုကျပါနျော…
Fifthy Shades Triologyလို Eroticဆန်ဆန် ဒရာမာကားတွေ ဒီနှစ်ထဲ သိပ်မထွက်ပါဘူး။အခုထွက်တဲ့ကားကတော့ IMDd Rating 6/10ပါ။ Erotic လိုင်းအနေနဲ့တော့ မဆိုးဘူးပြောရပါမယ်။ မင်းသမီးလေးလည်း တော်တော်လှပါတယ်။ ဒီရုပ်ရှင်နဲ့ပဲ TIFF Award for Best Performance ဆုရသွားခဲ့တာပါ။
တစ်နာရီဆိုတဲ့ ပြသချိန်တိုတိုလေးနဲ့မလိုက်အောင်ပါဖော်မန့်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ သဘောပါပဲ။ Eroticအသားပေး Drama filmဆိုတဲ့အတိုင်း လိင်မှုကိစ္စတော့အတော်ပါပါတယ်။ ပါတယ်ဆိုပေမယ့်လို့Erotic Filmမို့ အရမ်းကြီးတော့ မျှော်လင့်တော့မထားကြပါနဲ့။ ဘာပြောပြောလေ ဒါမျိုးကားတွေက မင်းသမီးလှရင်တောင် တန်နေပြီမို့လား။
ဇာတ်လမ်းအကျဥ◌်းလေးပြောပြရရင် . လန်ကာဟာ အသက် ၃၀ မှာတင် အောင်မြင်တဲ့ သားဖွားမီးယပ်ဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်နေပါပြီ။ လူနာတွေက သူနဲ့မှပြချင်ကြသလို လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တွေကလည်းသူ့ကိုလေးစားကြပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ တဖက်မှာလည်း သူ့ရဲ့အိမ်ထောင်ရေးက အဆင်မပြေပါဘူး သူ့ခင်ပွန်းဖြစ်သူဆယ်ရို့ဂ်ျက လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်ဖြစ်သူ ခါဂျာနဲ့ ဖောက်ပြန်နေတယ်လို့ လန်ကာက တထစ်ချယုံကြည်နေပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူကြောင့် စိတ်ထိခိုက်ပြီး ထင်ရာစိုင်းမိရာကနေ ဘာတွေဆက်ဖြစ်ကုန်မလဲဆိုတာတော့ကိုယ်တိုင်ပဲကြည့်ရှုခံစားလိုက်ပါနော်…